Filohan'ny filankevi-pitantanana afrikanina handray anjara amin'ny loka Exclusive Financial Afrik
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Filohan'ny filankevi-pitantanana afrikanina handray anjara amin'ny loka Exclusive Financial Afrik
Birao fizahantany afrikanina • Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Maoritania • Vaovao • Tourism • Travel Wire News
Filohan'ny birao afrikana Alain St.Ange
Ny Financial Afrik Awards dia fivoriana manokana isan-taona ho an'ny fitantanam-bola afrikanina. Mampivondrona ireo tale jeneralin’ny orinasa sy ireo mpanatanteraka ambony avy amin’ny sehatra ara-bola samihafa.
Ny hetsika fanolorana loka dia natao eo ambany fiahian'ny Filoham-pirenena Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Filohan'ny Repoblika.
Amin'ny endrika virtoaly, manodidina ny 400 ireo mpisoratra anarana hanaraka ny roa andro amin'ny fizotran'ny fihaonambe.
Manodidina ny 200 eo ho eo koa ny olona handray anjara amin’ny sehatra ara-bola samihafa.
Nanamafy ny gazety ara-bola pan-Afrikan Financial Afrik, miara-miasa amin'ny Minisiteran'ny toekarena Maoritaniana sy ny fampiroboroboana ny sehatry ny famokarana, fa nanasa an'i Alain St.Ange, filohan'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) ary Minisitry ny Fizahantany, Sivily Sivily, Seranana ary An-dranomasina Seychelles teo aloha, handray anjara amin'ny andiany fahefatra amin'ny Loka Financial Afrik.
Hotanterahina ao amin’ny Hotely Al Salam Resort any Nouakchott, Maoritania, ny 16 sy 17 desambra 2021, eo ambanin’ny lohahevitra ankapobeny hoe “Africa in 2050” ny loka.
Ny hetsika, eo ambany fiahian'ny filoha hajaina Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Filohan'ny Repoblika, dia hampivondrona olona 200 avy amin'ny tontolon'ny toekarena, ara-bola ary fandraharahana ary, saika misoratra anarana 400 eo ho eo izay hanaraka ny fihaonambe amin'ny alàlan'ny a sehatra voatokana.
Ao amin'ny Nouakchott, fanontaniana iray ny famaritana ny fironana eran'izao tontolo izao any Afrika amin'ny 2050 mba hanomezana ny fanjakana sy ny fikambanana ny fitaovana famakafakana amin'ny fiandrasana stratejika.
The Afrikana ara-bola Ny loka dia hetsika miavaka izay mampivondrona isan-taona, nanomboka tamin'ny taona 2018, manam-pahaizana, mpanatanteraka ambony amin'ny banky, orinasa fiantohana, andrim-panjakana, fintech, fifanakalozam-bola, ary vola fampiasam-bola, sns., ary koa ireo tale jeneraly sy mpanapa-kevitra avy any Afrika ary any an-kafa.
Hifarana amin’ny takarivan’ny mari-pankasitrahana ireo olo-malaza niavaka teo amin’ny sehatra misy azy avy ny loka Financial Afrik.
Momba ny Birao Afrikana momba ny fizahantany
Naorina tao 2018, ny Birao fizahantany afrikanina (ATB) dia fikambanana malaza iraisam-pirenena amin'ny maha-mpanentana ny fampandrosoana tompon'andraikitra amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany mankany, avy, ary ao anatin'ny faritra Afrikana. Ny ATB dia anisan'ny Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany (ICTP). Ny Fikambanana dia manome soso-kevitra mifanaraka, fikarohana lalina ary hetsika vaovao ho an'ny mpikambana ao aminy. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpikambana ao amin'ny sehatra tsy miankina sy ho an'ny daholobe, ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia manatsara ny fitomboana maharitra, ny lanjany ary ny kalitaon'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany any Afrika. Ny Fikambanana dia manome fitarihana sy torohevitra ho an'ny tsirairay sy ho an'ireo fikambanana mpikambana ao aminy. Ny ATB dia manitatra ny fahafahana ara-barotra, fifandraisana amin'ny besinimaro, fampiasam-bola, marika, fampiroboroboana ary fananganana tsena manokana.